Xiaomi AirDots ekweisi nyochaa | Gam akporosis
Taa, anyị ji ekweisi ekwe ntị laghachi, mana ọ bụghị nke ọ bụla. N'ikpeazụ anyị enwetawo atụ anya ụgbọ elu AirDots sitere na Xiaomi. Otu n'ime ngwaọrụ ndị mepụtara atụmanya kachasị maka ihe ha nwere ike inye. Ma maka ọnụahịa anyị nwere ike nweta ha yana nke ahụ nwekwara ekele ịbụ onye na-agụ Androidsis ị nwere ike nweta ego dị oke mkpa dị ka a tụlere n'okpuru.
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere oge ọ bụla anyị na-ekwu maka ekweisi iji jiri ya tụnyere ndị kachasị ewu ewu na ahịa. Na agbanyeghị na anụ ahụ ha abụghị otu na ihe ọ bụla ọzọ karịa na ha nwere otu agba. Apple's AirPods na-enwewanye ndị na-ama ya aka karia ike agha.
1 AirDots megide ihe niile
2 Aesthetics na ọdịdị dị ugbu a
3 Ndị a bụ AirDots
4 A na-ege ntị nke ọma
5 Arụ ọrụ dị elu iji sọọ mpi megide AirPods
6 Nka nka na ụzụ
AirDots megide ihe niile
Nyere na-eto eto ma na-eto eto nke Xiaomi nwetara n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọ bụ ihe nkịtị na nke ọ bụla n’ime mbipụta gị na-ewelite obere mmasi. Dị ka anyị si mara, na mgbakwunye na ama ama nke mmeri, Xiaomi anaghị akwụsị ịmepụta ngwa na ngwa nke mma na ọnụahịa dị mma pụtara.
Malite na ogige ndị a ọ bụ ihe ezi uche dị na ya Igweisi Bluetooth nke Xiaomi mere ghọrọ ihe a na-achọsi ike maka ọtụtụ ụmụazụ ụlọ ọrụ ahụ. Na Androidsis anyi enweela obi uto iji nwee ike igbalita ha, dika mgbe nile, gwa gi n'uju ihe anyi chotara. Ọ bụrụ n ’ịnweghị ike chere ịnwe ha zụta ha ugbu a site na ịpị ebe a ọnụahịa kacha mma iji mpempe ego ego BHADots.
Aesthetics na ọdịdị dị ugbu a
N'ime ọnwa ole na ole anyị ahụla otú katalogi nke wireless ekweisi ba uba na-enweghị ịkwụsị. Ma nke a na-enyekwara anyị aka inwe ike ịmata ọdịiche dịtụ iche dịgasị iche na ogo na arụmọrụ. Xiaomi's AirDots bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndị kachasị mma n'ihi na ma, ezi arụmọrụ na àgwà nke rụpụta.
Ọ bụrụ na i lee anya na aesthetics na ọdịdị ahụ nke AirDots gosipụtara anyị na-ahụkwa ezigbo ọrụ site na Xiaomi. Anyị hụrụ ụfọdụ ekweisi na a kpachara anya imewe. Site na chaja igbe ya na ekweisi onwe ha. Ihe abuo nwere otu Oval mere na yiri Agba ọcha. Ejiri plastik dị mma dị mma na nguzogide dị mma obere ibu ya na-eju anya.
Ndị a bụ AirDots
Igbe na chaja nwere a elu mechara n'isi gloss, nke na-emechi n'ụzọ zuru oke ekele a magnetized ọnụ. Site na mmetụ obi ụtọ nke gwụchara na matte na ala, ọ bụ n'ezie adaba iji buru n'akpa. Nha na ịdị arọ nke ị na - achọpụtaghị na anyị na - ebu ha. Na azụ ya anyị na-ahụ Micro USB nkwụnye njikọ.
Ekweisi nwere otu nhazi ahụ. Really na-enwe mmasị ịhụ nkọwa nke ụdị a, karịsịa na ngwaọrụ nwere ọnụahịa ọnụ. Ọ bụ ya mere anyị ji ahụ na elu, nke ga-abụ nke si na ntị otu ihe na-egbu maramara. Aka elu nke anyị nwere ike ịmekọrịta dabere na isi ihe anyị na-eme.
Na ekweisi anyị nwere ike inye kpọọ ma ọ bụ kwụsịtụ playback nke egwu, bulie ma ọ bụ kpọgidere oku. Ma anyị nwere ike ọbụna kpọọ onye enyemaka olu Google nke ekwentị anyị. Na akụkụ nke dị n'akụkụ nke ntị anyị na-ahụ otu nchupu dịkwa na matte ọcha. Anyị chọtara mkpọ ndị dakọtara na ndị dị na igbe ahụ.
Xiaomi ahọrọla ịkwado AirDots na in-ntị usoro. Na maka ahụmịhe na-ege ntị ka ọ bụrụ ihe kachasị mma anyị nwere atọ pad nke nha ozo. A ekweisi na nke otú e si debe ha dị ezigbo mkpa ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ egwu dị egwu ha na-enye anyị.
Ọ bụrụ na ndị Airdots kwenye gị zụta ha ebe a na GearVita ọnụahịa kacha mma. Na BHADots ego coupon ọnụahịa gị ga-adị ala karịa!
Dika anyi ji ekwu okwu banyere oge na ekweisi ozo, ọ na-enwe ekele dị ukwuu na imewe na ọdịdị nke otu ihe ahụ bụ nke mbụ. N’aka ozo, odidi ya “esighi n’ike ozo” sitere na ekweisi ozo n’esi n’otu ulo oru ama ama. Ebumnuche nke mbu ma gosipụta ya ọzọ Iomi ihe na-aga nke ọma abụghị otu ihe ịga nke ọma. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe dị iche.
A na-ege ntị nke ọma
N'adịghị ka ihe anyị nwere ike iche mgbe anyị na-ele anya n'ụdị AirDots, ụzọ ziri ezi nke itinye ntị kwesịrị ịbụ kwụ. Ọ bụ ụzọ nke fom na-adaba nke ọma na oghere nke ntị. Ma otu a ka anyị siri jisie ike nweta ogo kacha dị elu. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụ ezie na ha enweghị mkpọtụ mkpọtụ, iche nke ụda dị na mpụga dị ezigbo mma.
Ozugbo etinyebere anyị na ntị anyị, anyị ga-ekwu nke ahụ olu dị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Obi abụọ adịghị ya, AirDots nọ n'ọnọdụ kachasị elu, n'ihe banyere olu, nke ekweisi niile nke ụdị a nke anyị nwalere ruo taa. Ọ bụrụ n ’egwu na-amasị gị, Xiaomi na-enye gị ezigbo ihe ọzọ.
Lee ị nwere ike ịzụta Xiaomi AirDots ugbu a naanị $ 30.99 site na BHADots coupon
Kama nke ahụ, n'ihi na ọnọdụ ya na-eme ka igwe okwu pụọ n'ọnụ. Ahụmahụ na oku abụghị nke kachasị mma. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị eyiri ekweisi anyị na-ekpe ekpere ahụ n'ụzọ zuru oke. Onye nọ n’akụkụ nke ọzọ na-aghọta olu anyị site n ’anya dị anya karịa ka achọrọ, ya mere na ọ nwere nnukwu olu.
Arụ ọrụ dị elu iji sọọ mpi megide AirPods
Na mgbakwunye na atụmatụ ahụ e kwuru n'elu, nke anyị chere na ọ bụ ezigbo ihe ịga nke ọma, AirDots na-enye teknụzụ ọhụụ na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri. Dị ka ụdị ngwaọrụ a, ekweisi ndị a nwere teknụzụ Ezi Waya Nkwado. Ekele ya, a na-emekọrịta ha na-akpaghị aka iji nye ụda stereo kachasị mma.
Iji jikọọ ha na ngwaọrụ anyị nanị ihe anyị ga-emezi imepe igbe ahụ. Mgbe wepụ ekweisi na ya ejikọrọ na ekwentị anyị anyị nwekwara ike ịkpọ egwu ma ọ bụ kpọọ oku. Na mgbe etinyere ha n'ime igbe ahụ, ha na-apụ na-akpaghị aka ha ebukwa ha ibu. Ala, arụ ọrụ ma mara mma nke ukwuu.
Ọ bụrụ na ịlele batrị ya, Xiaomi's AirDots nwere ike ịdalata ntakịrị. Dabere na emeputa, ha 40 mAh na-enye 6 awa nke oge nke bu eziokwu di obere. Igbe gị chaja nwere 300 mAh inwe ike inye ruo 7 zuru ụgwọ cycles. More nke awa iri na abụọ eji na anyị ga-enwe 100% jiri awa na ọkara ụgwọ.
Nlereanya Ụgbọ elu
Bịa Ogwe 10
Mkpọchi akara bọtịnụ tactile
Isi igwe batrị 40 mAh
Batrị igbe-chaja 300 mAh
Akụkụ X x 2.3 1.4 1.3 cm
Ibu ibu 99.8 g
Ahịa 52.03 €
Linkzụta njikọ Ụgbọ elu
Ibu lightweight ibu
Ogo ụda na ike olu
Micro USB njikọ
Nchaji USB dị mkpụmkpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi AirDots ekweisi nyochaa
Oukitel K12, nwere batrị 10.000 mAh, ga-abanye n'ahịa ahụ na June